Home » Toerana fitsangatsanganana » Tsy misy famerana intsony any Florida sy COVID-19 nanambara ny tantaran'ny governora DeSantis
Niverina tamin'ny fahalalahany ve ny vahoaka tao Florida, sa fiantsoana hamono tena ataon'ny governora Ron DeSantis ity.
Androany, ny governora Ron DeSantis dia nanatevin-daharana ny mpanao lalàna eo an-toerana sy ny tompona orinasa kely ao St. Petersburg izay nanasoniavany ny volavolan-dalàna senat (SB) 2006, lalàna manan-danja natao hanakanana ny onjan'ny fanitsakitsahana ny governemanta eo an-toerana sy ny fanjakana rehefa nanonona izany izy.
Ity volavolan-dalàna ity dia mikendry ny fanidiana tsy ara-dalàna, pasipaoro vaksinina ary fanamafisana ny fiomanana maika hamonjy ny ho avy.
Ny governora DeSantis koa dia nanao sonia ny Executive Order 21-101 ary 21-102 fampiatoana ny kaomandy vonjy maika rehetra eny an-toerana hatramin'ny 1 Jolay 2021, amin'izay fotoana izay dia hofoanana tsy tapaka ny kaomandy ao an-toerana mifanaraka amin'ny SB 2006.
Raha nanoratra aretin-tratra COVID-3075 19 bebe kokoa i Florida ary 38 kosa no maty, ny governoran'ny fanjakana Sunshine dia ampy. Betsaka ny olona maty ao India amin'ity tontolo mifandray ity. Florida dia vavahady lehibe amin'ny fivezivezena, indrindra avy any Amerika atsimo, izay misy virus miova sy miparitaka.